Bulshada Daryeelka | Samfunnskunnskap.no
Bulsho hab daryeel leh waa bulsho waxyaalaha ugu muhiimsan ee nolosha dadka, sida waxbarashada iyo caafimaadka la sugo iyadoo ay sugidooda sawladdu masuul ka tahay. Kaalmada dadweynuhu waa mid dadkoo dhan la gaarsiiyo. Daryeel bulsho waxay dawladdu u qeybisaa si ay dhammaan dadweynuhu u heli lahaayeen waxyaalaha daruuri ah, sida guri la galo, cunto, daawo, kaalmo waxbarasho.
Habka daryeelka Noorway waxaa loogu yeeraa habdka daryeelka dawladda, sababtoo ah dawladda iyo degaanka ayaa ka masuul ah daryeelka bulshada.
Bulshada daryeelka waxaa inta badan maalgeliya dadweynaha canshuurtooda iyo dulsaarka beecnushtarka. Sidoo kale dawladdu waxay isticmaashaa dhaqaalaha ka soo gala dhoofinta, sida shidaalka iyo gaaska ay ku maalgelisaa daryeelka bulshada.
Inkastoo ay dawladdu masuul ka tahay kaalmada daryeelka, sidoo kale ururada tabaruca ah iyo shaqsiyaadka gooni ah waxay qabtaan shaqo aad u weyn.
Bulsho daryeel waa ummad uu sareeyo daryeelkooda si isla egna loogu qeybiyo daryeelka.
Daryeelku waa qarash badan yahay. Dhammaan dadka ku degan Noorway ayaa bixiya daryeelka bulshada, waxayna ku bixiyaan bixinta canshuurta iyo dulsaarka beecmushtarka.